Beentaada Abriil Xiliga 2: Waxyaabaha aad u Baahan Tahay inaad Ogaato! - Madadaalo
Beentaada Abriil Xiliga 2: Waxyaabaha aad u Baahan Tahay inaad Ogaato!
Goorma ayaa xilliga labaad ee Beentaada bisha Abriil la soo bandhigi doonaa?
Beentaadii Abriil Ingiriis Dub:
Shirqoolkii Beenta Abriil:
Waxay u egtahay in wax indhahayga ku duulay, ama laga yaabee inaan aad u daawado 'Beentaadii Abriil.' Markii ugu horreysay ee aad aragto 'Cilliga Xiddigahayada,' sideed dareentay? 'Beentaada bisha Abriil' waxay leedahay 22 qaybood, markaa ku dhufo dareenkaas qadhaadhka ah toban, waxaadna dareemi doontaa si isku mid ah markaad dhammayso daawashada dhamaantood.
Heesta ku jirta barnaamijkan waa waxa ka dhigaya mid ka duwan bandhigyada anime-ka-nolosha ee kale. 'Beentaada bisha Abriil' waa ka reeban tahay qaanuunka, xitaa haddii aadan taageere weyn u ahayn muusigga qadiimiga ah.
Marka lagu daro muusiga, midabada firfircoon ee anime-ga ayaa door muhiim ah ka ciyaara muujinta sheekada. Waa duni midabo la jabsaday oo loogu talagalay Kousei, oo ka mid ah jilayaasha, ilaa Kaori uu soo galo goobtiisa. Sida quruxda anime-ku muujinayo, jacaylku hubaal wuu iftiimin karaa waxyaabaha.
Waa run in Beentaada bisha Abriil, iyadoo muuqaal ahaan iyo muusig ahaanba cajiib ah, ay sidoo kale tahay dabaq hoose oo qoto dheer. Muusigga, jacaylka, iyo murugada dhammaantood waxay si tartiib ah u galaan mawduucyada bandhigga, kuwaas oo dhammaantood ku garaacaya mindhicirka.
Taageerayaal badan oo anime ah ayaan jeclayn dukaanka bandhigga sababta oo ah waa hab habaysan. Si kastaba ha ahaatee, waa cadaalad darro in lagu xukumo oo keliya iyadoo lagu salaynayo dhagarteeda. Haddii aad raadinayso sawir ku saabsan xaddidaadda filimka ficil-tooska ah, tixgeli 'Jacayl, Dhimasho, iyo Robots. 'Beentaada bisha Abriil', dhinaca kale, waxay si buuxda uga faa'iidaysanaysaa awoodaha gaarka ah ee dhexdhexaadiyaha.
Dhib malaha inta animes-ka-nolosha ah ee aad aragtay, waa inaad midkan siisaa tallaal. Waxaad ku dhaafi doontaa dareen madmadow oo murugo leh oo ka imanaya shucuurta anime-ka, dhagarta muhiimka ah, iyo muuqaallada cajiibka ah.
Xataa ka dib markii ay daawatay xilli ciyaareedkii ugu horeeyay, dad badan ayaa wali la rafanaya dareenka shucuureed ee ay la kulmeen. OVA-yada ama kuwa gaarka ah waxay aad ugu dhowdahay inay raacaan dhamaadka xilli ciyaareedka koowaad marka loo eego xilli labaad. Rabitaanka xilli-ciyaareedka cusub waa mid fiican, laakiin hadda, waxba ma ballan qaadi karno.
Laga bilaabo 10/10/2014 ilaa 20/3/2015, daawadayaashu waxay daawan karaan xilliga ugu horreeya ee Beentaada bisha Abriil online. 22 qaybood oo hal saac ah ayaa lagu daray xirmada. OVA-yadu waxa laga yaabaa inay na siiyaan dhawr qaybood oo gunno ah in kasta oo aanay suurtogal ahayn xilli kale, sidii hore loo sheegay.
Had iyo jeer waa ikhtiyaar inaad qorto khayaali faneedka fanka, ama waxaad sii wadan kartaa maalintaada oo aad sii wadan kartaa caadadaada caadiga ah. Xilliga 2 ee Beentaada bisha Abriil waxa laga yaabaa inay hawada soo gasho horraanta 2021, iyada oo loo maleynayo in bandhigga la siiyay iftiinka cagaaran si uu u soo laabto. Waxaan ku ogeysiin doonaa sida ugu dhakhsaha badan macluumaadka cusub ee ku saabsan anime xilli ciyaareedka soo socda la helo.
'Beentaada bisha Abriil,' oo sidoo kale loo yaqaan 'Shigatsu wa Kimi no Uso,' waa taxane anime ah oo laga heli karo Crunchyroll, Netflix, Animelab, iyo VRV, iyo meelo kale.
Marka loo eego asxaabtiisa iyo macalimiintiisa, Kousei Arima waa halbeegga socodka marka ay timaaddo ciyaarista biyaano. Dhimashadii foosha xumayd ee Kousei hooyadeed, oo ahayd xoogga ka danbeysa hawlihiisa muusiga, ayaa ka dhigtay inuu awoodi waayo inuu maqlo ama dareemo muusikadiisa. Wuxuu qaatay go'aan ah inuu ka tago meheradda muusiga oo uu bilaabo bog cusub oo noloshiisa ah.
Go'aanka Kousei ee ah in aan waligiis ku soo laaban nolosha dadka jecel iyo tartanka isma bedelin inkastoo wakhtigu sii socdo. Taa baddalkeeda, wuxuu waqtigiisa la qaataa laba saaxiib, Ryouta Watari iyo Tsubaki Sawabe, oo ku sugan adduun caajis ah oo madow iyo caddaan ah.
Arrimuhu ma bilaabaan inay is beddelaan isaga ilaa uu la kulmo violinistaha yaabka leh ee Kaori Miyazono, kaas oo la wadaaga farxadiisa piano-ga. Waxa uu dib u ogaanayaa hamigiisii ​​dheeraa ee muusiga ka dib markii uu la kulmay. Nolol cusub oo la helay iyo dib u soo kicinta dareenkiisa ujeedo ee lumay ayaa si tartiib tartiib ah xidid ugu yeesha jiritaankiisa qalafsan.
Tani waa sheeko-socod oo ay jilaagii, Arima, la halgamaysay sidii uu u fahmi lahaa waayihiisii ​​iyo sida ay u saamayso hadda iyo mustaqbalka. In kasta oo argagaxa uu arkay, haddana waxa uu diyaar u yahay in uu hore u socdo, wuuna awoodaa in uu sidaas sameeyo, in kasta oo uu si tartiib tartiib ah u socdo.
Bandhiga ku saabsan dhallinyaranimada, jacaylka ubaxa waa la bixiyaa. Bandhigu wuxuu ku wareegayaa xiriirkan, kaasoo si tartiib tartiib ah u kobcaya dhowr hindise-hoosaadyo isaga u gaar ah. Tani waa meesha anime-ku ka bilaabo inuu ku dhufto oo uu muujiyo ceebihiisa.
Booska Eeyaha Xiliga 2: Faahfaahinta Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Hadda!
Xiliga Rust American 2: Faahfaahinta Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Hadda!
Waxaan u maleynayaa inaad ka tagto Xiliga 3: Cusbooneysii Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Maanta!
Natiijo ahaan, bandhiggu wuxuu ku dhamaanayaa heer sare oo laga yaabo in lagu gaaro 15 qaybood halkii 20. Waa epilogue, si kastaba ha ahaatee, taas ayaa iga dhigtay inaan rabo inaan kubad ku duubo oo indhahayga ka ooyo meel mugdi ah ku saabsan.
Dhawr qaybood oo kale ayaa suurtagal ah, laakiin xilli dhammaystiran oo anime ah waa wax aan macquul ahayn. Dhamaadka fudud ee anime-ga ayaa tusaale fiican u ah bandhiga laga yaabo in lagu qaddariyo waxa ay tahay halkii aan ahayn waxa aan ahayn.
Edilson wuxuu ku dalacay Cruciro Na Justia $ 9.2 milyan
sida muusig loogu daro ciyaarta roblox
xbox 1 lambarrada tooska ah
youtube tv 30 maalmood koodh tijaabo ah
hargaha qalabka muusikada ee android
pokemon go server la kulma arrimo
sida loo helo koonto xbox oo toos ah